Fanamarihana fitaovana - MimoWork
Mba ho mora amin'ny marika amin'ny fitaovana, MimoWork dia manome safidy laser roa ho an'ny milina mpanapaka laser anao.Amin'ny fampiasana penina marika sy safidy inkjet, azonao atao ny manamarika ny workpieces mba hanatsorana ny fanapahana laser sy ny famokarana sokitra manaraka.Indrindra amin’ny resaka fanjairana marika eo amin’ny sehatry ny famokarana lamba.
Fitaovana mety:Polyester, Polypropylène, TPU,Acrylicary saika ny rehetraLamba sintetika
R&D ho an'ny ankamaroan'ny tapa-tavoahangy laser, indrindra ho an'ny lamba.Azonao atao ny mampiasa ny penina mba hanaovana ny marika eo amin'ny tapa-kazo, mba hahafahan'ny mpiasa manjaitra mora foana.Azonao atao koa ny mampiasa azy io mba hanaovana marika manokana toy ny nomeraon'ny vokatra, ny haben'ny vokatra, ny datin'ny fanamboarana ny vokatra sns.
Toetra sy zava-nisongadina
• Azo ampiasaina ny loko samihafa
• Fahamarinan'ny marika avo lenta
• Mora ovaina ny penina marika
• Azo alaina mora foana ny Mark Pen
• Vidiny ambany
Ampiasaina betsaka amin'ny varotra izy io amin'ny marika sy fanodinana vokatra sy fonosana.Ny paompy fanerena avo dia mitarika ny ranomainty avy amin'ny fitahirizana amin'ny alalan'ny vata-basy sy ny nozzle microscopique, mamorona ranomainty mitete tsy tapaka amin'ny alàlan'ny tsy fandriam-pahalemana Plateau-Rayleigh.
Raha ampitahaina amin'ny 'marker pen', ny teknolojia fanontam-pirinty ink-jet dia dingana tsy mikitika, ka azo ampiasaina amin'ny karazana fitaovana maro hafa.Ary misy ranomainty isan-karazany ho an'ny safidy toy ny ranomainty mivaingana sy ny ranomainty tsy miovaova, ka azonao ampiasaina amin'ny indostria samihafa.
• Tsy misy fikorontanana noho ny marika tsy misy fifandraisana
• Ranomainty maina haingana, tsy azo kosehina
• Azo ampiasaina ny ranomainty/loko samihafa
• Haingana kokoa noho ny fampiasana penina marika
Raiso ny safidy mety hanisy marika na fametahana ny fitaovanao!
MimoWorkdia manolo-tena amin'ny fahazoana fepetra famokarana tena izy sy ny famolavolana vahaolana laser matihanina hanampy anao.Misy rafitra milina laser sy safidy laser azo isafidianana araka ny fangatahana manokana.Azonao atao ny manamarina ireo na mivantanaanontanio izahaymba toro-hevitra tamin'ny laser!
Ahoana ny fisafidianana ny penina marika sy ny ranomainty ho an'ny mpanapaka laser anao
Miresaha amin'ny Laser Consultant anay izao!